Dhagaxdii laga qaaday qeybo ka mid ah Muqdisho oo siyaasad lala xiriiriyey iyo mucaaradka oo shakisan – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya ayaa habeen hore qaaday dhammaan difaacyadii yiilay xaafadda Buula-xuubeey ee degmada Wadajir iyo xaafadaha kale ee ku teedsan, waxaana sidoo kale aagaasi laga qaaday dhamaan ciidanka dowladda ee ku sugnaa marka laga reebo goobo yar.
Xaafadaha ciidanka iyo difaacyada laga qaaday oo ku dhow dhow garoonka Muqdisho waxaa dagan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa halkaas dhowaan ka kireestay guri.
Xubno ka mid ah mas’uuliyiinta Madasha Xisbiyada Qaran oo nala hadlay ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin sababta aagaasi ciidanka looga wareejiyay iyo difaacyada iyadoo inta kale ee magaalada Muqdisho wali ay sidii u xiran yihiin.
“Ciidankii waa la qaaday, difaacyadii waa la qaaday waana aageynaa oo kaliya maxaa inta kale loo qaadi waayay danta laga leeyahay maxaa waaye, shaki badan ayaa qabnaa,” ayuu yiri mid ka mid ah Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira Madasha Xisbiyada Qaran.
Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka milateriga Soomaaliya oo ay qaraabo yihiin Madaxweynihii hore ee Somaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay in arrintaan ay shaki badan dhalineyso.
“Waxaa iska cad in arrintan ay shaki abuureyso, waana xaqi inay shakiyaan madaxdii oo ay dareemaan in la dayacayo,” ayuu yiri.
Dadka magaalada Muqdisho ayaa subaxii Isniinta ku soo baraarugay iyadoo laga qaaday dhagxaantii tiilay xaafado ka tirsan degmada Wadajir oo markii hore dhib badan ay kala kulmi jireen shacabka degmadaasi inkastoo ay soo baxayaan warar kale oo walaac leh.